सरस्वती पाण्डे/ नारी दिवसको दिन सामाजिक सञ्जाल, मिडियामा नारीको प्रशंसा र महत्वका कुरा भए । यस्ता कुराले भरिभराऊ भए । जसमा पुरुषले ज्यादा प्रशंसा गरेको देखियो । पढेकी श्रीमतीले जागिर खान खोज्दा हुन्न भनेर बाहिर निस्किन नदिने पुरुषले पनि नारीको गुणगान गाएको देख्दा खुसी लाग्यो । व्यवहारमा नारीको सम्मान नगरेर उनीहरूलाई घरभित्रकै कसिङ्गरसँग खेल्न लगाएकाले एक दिन भएपनि शब्दमै नारीको सम्मान गरे ।
नारीहरू पनि आज पुरुष सरह अगाडि बढिरहेका छन् । तर परिवार, समाज र राष्ट्रको सहयोग पाएर नै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सफल भएका हुन त ? एउटी नारी घरबाट निस्केर समयमा घर नपुग्दा उसलाई हेर्ने नजर भने फरक हुन्छ । दैलो पार गरेर पुरुष बाहिरिन्छ र आधा रातमा फर्कन्छ भने कसैले एक शब्द बोल्दैनन् । तर नारीलाई किन फरक नजरले हेरिन्छ ? सँगै स्कूल पढ्ने केटा र केटीमा केटाले चुरोट र रक्सी खाँदा ए ! त्यसको छोरा त निकै ठूलो भएछ है, सबै खान थालेछ सम्म भन्छन् । तर त्यही केटीले खाँदा के जमाना आयो हरे ! भगवान यस्तो नि देख्न प¥यो, फलानाकी छोरी खत्तम भइछे, बाटो –बाटोमा खाँदै हिँड्दिरैछे भन्न पछि पर्दैनन् । यहाँ समानता खोई ? रामले खाएको कुरा सीताले खाँदा के हुन्छ ? खाने कुराबाट नै नारी र पुरुषलाइ विभेद गरिएको छ भने अरु के कुरामा समानता होला र !
त्यस्तै आज पुरुष पुग्ने ठाउँमा महिला पनि पुगेका छन् । तर कुनै पनि नारीलाई जहाँ पुगे पनि सुरक्षा छैन् । दिनदिनै नारी कसैको ओछ्यान भएकी हुन्छे, कसैको नोकर भएकी हुन्छे, कसैको भान्छे भएकी हुन्छे, नारी जे भएकी हुन्छे त्यो सबै उस्को इच्छाभन्दा विपरित भएकी हुन्छे । किनकी उसलाई सबैलाई खुसी पार्ने ठेक्का दिएको हुन्छ । प्रायः नारी मात्र किन बलात्कारको सिकार भएकी हुन्छे ? नारीमा पनि आवेग र संवेग हुन्छ । पुरुषमा पनि हुन्छ । नारीले चाहिँ उस्को आवेगलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छे भने पुरुषले किन सक्दैन ? नारीको प्रसङ्गबाट उठेका यी प्रश्नको जवाफ दिनेहरू धेरै हुन्छन् तर सकारात्मक रूपमा हैन कि नकारत्मक रूपमा दिने धेरै हुन्छन् । मैले महिलामात्र राम्रो भनिरहँदा धेरैलाई रिस उठ्न सक्छ । सबै पुरुषहरू नकारात्मक छन् भन्ने पनि होइनन् ।
नारी अगाडि बढ्ने सहयोग पनि पुरुषबाटै हुन्छ । नारी र पुरुषबिचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ । नारी र पुरुषको यो रंगिन संसारलाई हामी सबै मिलेर सार्थक बनाऔं । राम्रो काम गर्नेलाइ सहयोग गर्ने गरौं र नराम्रो काम गर्नेलाई सबै मिलेर सजाय दिने गरौं । म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती पुरुषहरूलाई । जसले आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढ्न हौसला दिएका छन् । गाँस कटाएर छोरा र छोरीलाई बराबर हक दिएका छन् । अन्त्यमा, एउटा नारीले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई सिंगार्न हरपल लागिरहेकी हुन्छे । घरबाट निस्किएर केहि गर्न खोज्ने नारीलाई घरबाटै सबैले सहयोग गरौं । नारी दिवस मनाउन ८ मार्च कुरेर गुणगान गाउनेहरूले नारीले गरेका सफलताका गरेका कामलाई प्रोत्साहन गरेर सहयोग गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित २५ फाल्गुण २0७४ , शुक्रबार | 2018-03-09 03:34:58